Anyị bụ ndị a blog raara nye edemede akụkọ na isiokwu akụkọ. Anyị na-enwe mmasị ịbanye n'ime ndị edemede oge ochie ma na-agba ajụjụ ọnụ banyere ndị edemede kachasị mma Dolores Gburugburu o marwan na-anabatakwa ndị edemede ọhụrụ.
Anyị nwere ihe karịrị 450.000 Twitter na-eso ụzọ na akaụntụ anyị @A_literature Si Ebee
Anyị na-achọ ịgafe ihe dị iche iche. Ebe ọ bụ na 2015 anyị na-aga n'etiti ndị ọzọ ka prestigious Onyinye mbara ala na anyị ga-agwa gị banyere ya ndụ na mbụ aka.
Ndị otu nchịkọta akụkọ nke Actualidad Literatura bụ nke otu ndị ndị ọkachamara n’edemede, ndị ode akwụkwọ na ndị odee nyere onyinye dị iche iche. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Site na Manchega vintage nke 70, abịara m dị ka onye na-agụ akwụkwọ, onye edemede na onye na-ese ihe nkiri. Mgbe ahụ amalitere m ịmụ ịmụ asụsụ bekee, ịmụ na ịsụgharị asụsụ Saxon ntakịrị. Emechara m ọzụzụ dị ka nsụpe na ịdegharị akwụkwọ maka ndị na-ebipụta akwụkwọ, ndị ode akwụkwọ na-enweghị akwụkwọ, na ndị ọrụ nkwukọrịta. Ana m ejikwa weebụsaịtị abụọ: MDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) na MDCA - LEARN ENGLISH AND SPANISH (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. Com /). Enwekwara m weebụsaịtị, MDCA - NOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) na blog, MDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), ebe Edere m banyere akwukwo, egwu, usoro onyonyo, ihe nkiri sinima na omenaala n’ozuzu ha. N'ihe omuma banyere edezi na nhazi, enwere m onwe m biputara akwukwo ise: "Marie", uzo ozo nke akuko "The wolves na kpakpando" na "Na Eprel".
Bachelor of Education, kpọọ asụsụ na akwụkwọ, site na Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Onye prọfesọ mahadum na oche nke akụkọ ihe mere eme, Spanish na Latin American akwụkwọ, yana egwu (nkwekọ na egwu guitar). Bachelor of Education, kpọọ asụsụ na akwụkwọ, (Udone). Mahadum prọfesọ akwụkwọ, akụkọ ihe mere eme na egwu. Ana m arụ ọrụ dịka onye edemede, na-eguzo na uri na akụkọ gbasara obodo. Offọdụ n'ime akwụkwọ m bụ: "Transeúnte", akụkọ; "Ozu di n'ikpere mmiri", nchịkọta uri. Ana m ejekwa ozi dị ka onye okike na ederede ederede.
Onye editọ na onye edemede kemgbe 2007. Onye hụrụ akwụkwọ n'anya kemgbe 1981. Kemgbe m dị obere, abụ m onye na-eripịa akwụkwọ. Nke mere ka m fee ha ofufe? Nutcracker na Eze ụmụ oke. Ugbu a, na mgbakwunye na ịbụ onye na-agụ akwụkwọ, abụ m onye edemede nke akụkọ ụmụaka, nke ndị na-eto eto, nke ihunanya, akụkọ na nke agụụ mmekọahụ. Nwere ike ịchọta m dị ka Encarni Arcoya ma ọ bụ Kayla Leiz.
Abụ m Ana Lena Rivera, onye edemede nke usoro aghụghọ nke Gracia San Sebastián. Okwu mbu nke Gracia, Lo que Callan los Muertos, anatala onyinye Torrente Ballester 2017 na onyinye ikpeazụ maka onyinye Fernando Lara 2017. Enwere m mmasị na akụkọ ifo site na nwata, mgbe m hapụrụ Mortadelo na Filemón maka Poirot na Miss Marple, yabụ mgbe ọtụtụ afọ gachara dị ka onye njikwa na nnukwu mba m gbanwere azụmaahịa maka oke agụụ m: Akwụkwọ akụkọ mpụ. Nke a bụ otú a mụrụ Gracia San Sebastián, onye na-eme nchọpụta na usoro nyocha m, ebe ndị nkịtị, dị ka onye ọ bụla n'ime anyị, nwere ike ịghọ ndị omekome, ọbụnadị igbu mgbe ndụ na-etinye ha n'ọnọdụ siri ike. Amụrụ m na Asturias, enwere m asambodo na Iwu na Nzụmaahịa na Njikwa na m bi na Madrid kemgbe ụbọchị mahadum. Site n’oge ruo n’oge achọrọ m isi ísì mmiri, Oké Osimiri Cantabrian, siri ike, na-ewu ewu ma dị ize ndụ, dị ka akwụkwọ akụkọ m na-edetara gị.
Dị ka ọtụtụ ndị mmegide, onye na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ, gụnyere ịgụ. Enwere m ekele maka ezigbo kpochapụwo mana anaghị m abanye na egwu mgbe ihe ọhụụ na akwụkwọ dabara n'aka m. M na-enwe ekele maka ịdị mma na ịdị mfe nke 'ebook' mana abụ m otu n'ime ndị na-ahọrọ ịgụ site na mmetụta akwụkwọ akụkọ, dị ka a na-eme mgbe niile.
Onye edemede nke njem na akwụkwọ edemede, onye hụrụ akwụkwọ ozi n'anya. Dịka onye edemede edemede, ebipụtara m akụkọ mmeri na Spain, Peru na Japan na akwụkwọ Cuentos de las Tierras Calidas.
Injinia na onye hụrụ akụkọ n'anya n'anya. Pathzọ m na akwụkwọ malitere site na Mariane Curley's "The Circle of Fire" ma bụrụ nke Robin Cook si "Toxina". Enwere m ikike nke maka fantasy, ma ọ bụ okenye okenye ma ọ bụ okenye. N'aka nke ọzọ, ọ na-amasị m ịnụ ụtọ usoro dị mma, ihe nkiri ma ọ bụ manga. A nabata ihe obula na-ebu akuko. Abụkwa m onye nchịkwa nke blọgụ edemede ebe m na-ede uche m banyere akwụkwọ m gụrụ: http://librosdelcielo.blogspot.com/
Degree na Hispanic Philology. N'ịbụ onye nwere mmasị n'ide ihe, emere m Master na Nkọwa na Creative Writing. Ebe ọ bụ na m dị obere, enwere m mmasị na akwụkwọ, yabụ na blọgụ a ị nwere ike ịchọta ndụmọdụ kachasị mma banyere otu esi ede akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ nwee ọmarịcha nyocha nke akwụkwọ ndị a ma ama.
A mụrụ m na Barcelona na ọnwa ikpeazụ nke afọ 80. Agụsịrị m akwụkwọ na Pedagogy na UNED, na-eme ka agụmakwụkwọ bụrụ ụzọ ndụ m. N'otu oge ahụ, ana m ewere onwe m ka onye ọkọ akụkọ ihe mere eme "onye na-amu amu", na-eche maka ọmụmụ ihe gara aga na ọkachasị esemokwu nke mmadụ. Ihe omume ntụrụndụ, nke a, nke m na-ejikọta na ịgụ, na-achịkọta akwụkwọ nke ụdị dị iche iche na, n'ozuzu, yana akwụkwọ na ọtụtụ ohere ya. Banyere ihe omume mmuta m dere, ekwuru m kwuo na akwụkwọ m kacha amasị m bụ "The Godfather" nke Mario Puzzo dere, ọkacha mmasị m saga bụ nke Santiago Posteguillo raara nye Punic Wars, onye isi edemede m bụ Arturo Pérez-Reverte na ntụpọ m n'akwụkwọ. bụ Don Francisco Gomez de Quevedo.
A mụrụ m n'otu ụbọchị ahụ Prince Henry nke England. O bu nwa eze England ma abum onye oba akwukwo. Daalụ Karma. (na-enweghị acrimony).